गर्भावस्था र सुत्केरीमा २२५ आईरन चक्की किन खाने? यस्तो भन्नुहुन्छ,स्वास्थ्यकर्मी खड्का
बिहिबार, असोज ७, २०७८ ०१:५०:०३ युनिकोड
रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा(गर्भावस्थामा १८० र सुत्केरी अवस्थामा ४५ दिन आईरन चक्कि खानुको महत्व र फाइदाहरुका विषयमा धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा अनमिको रुपमा सेवारत सविता खड्कासँग अनिल नेपालीले गर्नुभएको कुराकानीको संपादित अंश:
१.आईरन चक्की भनेको के हो ?
आईरन चक्की भनेको रगत बढाउने चक्की हो। जुन आईरनबाट बनेको हुन्छ।आईरन चक्कीको कमी हुनासाथ शरीरमा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्न सक्छ । कमजोर हुने, रोग सँग लड्ने क्षमता कम हुने गर्छ जस्ले गर्दा विभिन्न संक्रमण हुनसक्छ ।
२. आईरन चक्कि कहिलेबाट खान शुरु गर्नुपर्छ ? अनि कहिलेसम्म खानुपर्छ ?
आईरन चक्की गर्भवती महिलाले गर्भवती भएको तेस्रो महिना पुरा हुन लगत्तै अथवा ९१ औँ दिनबाट अथवा चौथो महिना सुरु भए लगत्तै दिनको एकपटक नछुटाई सुत्केरी भएको ४५ दिनसम्म खानपर्छ ।
३.गर्भवती महिलाले आईरन चक्की किन खानुपर्छ ? के फाईदा गर्छ यसले ?
गर्भवती महिलाले आईरन चक्की खानु एकदम जरुरत हुन्छ। किनभने गर्भवती महिलाको शरीरभित्र हर्मोन परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। गर्भवती महिलाको पाठेघर भित्र एउटा नयाँ जिवन हुर्किरहेको हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा आईरनको थप मात्रा एकदम आवश्यक हुन्छ। हामीले पौष्टिक आहार खाएता पनि आईरनको मात्रा पुरा नहुने भएको कारणले थप आईरन चक्की खान एकदम जरुरत हुन्छ। आईरन चक्कीले धेरै फाइदा गर्छ। शरीरको प्रत्येक अङग र प्रत्येक तत्वहरुलाई काम गर्नको लागि एउटा अक्सिजनको आवश्यकता हुन्छ । जुन अक्सिजन प्रत्येक अङगहरुलाइ पु¥याउने काम रगतले गर्छ ।
यदि शरीरमा आईरनको मात्रा कमी भयो भने रगतको मात्रा पनि कमी हुन जान्छ। र विभिन्न समस्याहरु देखा पर्न सक्छ । आईरन चक्कीले रोग सँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउने काम गर्छ। दिमागको बृद्धि विकास गर्नको लागि पनि यसले मद्धत गर्छ । आईरनको कमीबाट हुने विभिन्न समस्याहरुबाट मुक्त्ति दिन्छ।
आईरनको कमी भयो भने थकान लाग्ने, शरीरको उर्जाको स्तर घट्ने, हिड्न बोल्न मन नलाग्ने, कुरामा ध्यान नहुने, कपाल झर्ने, नङ भाचिने, सम्झिने क्षमतामा कम हुने, जिब्रो सुनिने, माटो खान मन लाग्ने, रिङगटा लाग्ने, शरीरको छाला तथा आखाको मुनि भागमा सेतोपन आउने, स्वाँ स्वाँ हुने जस्ता समस्याहरुबाट पनि बच्न सकिन्छ।
४. सुत्केरी भैसकेपछि पनि ४५ दिनसम्म आइरन चक्की किन खानुपर्छ ? यसले के फाइदा गर्छ ?
सुत्केरी अवस्थामा रगतको मात्रा एकदम धेरै बग्ने भएको कारणले त्यो रगतको मात्रा परिपुर्ति गर्नको लागि आईरन चक्की खान आवश्यक हुन्छ। कोहीको रगत धेरै बगेर ज्यान पनि जान सक्ने भएको कारणले आईरन चक्कीको महत्व हुन्छ।
सुतकेरी अवस्थामा आमाले खाएको आईरन चक्की आमाको दुधबाट बच्चामा जान्छ। जसले गर्दा बच्चाको दिमाग बढ्नको लागि मद्धत गरेको हुन्छ। बच्चाको बृद्धि विकासको लागि महत्वपुर्ण काम गरेकोे हुन्छ त्यसकारणले सुत्केरी अवस्थामा पनि आईरन चक्की खान एकदम जरुरत छ।
५. आईरन चक्की कुन समयमा खाँदा ठिक हुन्छ ? आईरन चक्की के सँग खाने वा के सँग नखाने?
आईरन चक्की हामीले खाना खानु भन्दा एक घण्टा अगाडि वा एक घण्टा पछि खाँदा एकदम राम्रो हुन्छ। आईरन चक्की खाना खाने वित्तिकै खायौँ भने जति लिनु पर्ने हो त्यो नलिने भएको कारणले एक घण्टा अगाडि वा एक घण्टा पछि जरुरत हुन्छ। एक घण्टा अगाडि खाँदा कसैलाई बान्ता हुने हुन्छ खालि पेट भएको कारणले खाना खाइसकेको एक घण्टा पछि खाँदा एकदम राम्रो हुन्छ।
गर्भवती अवस्थामा आईरन र क्याल्सियम नियमित रुपमा खान्छौँ। एकै चोटि नखानको लागि अनुरोध गर्छु । किनभने एकै चोटि खाँदा आईरन शरीरले जति लिनु पर्ने हो त्यो लिन सक्दैन। त्यसकारण बिहानको समयमा आइरन खानुभयो भने बेलुकाको समयमा क्याल्सियम खानु होला अथवा बिहानको समयमा क्याल्सियम खानुभयो भने बेलुकाको समयमा आइरन खानु होला। आईरन चक्की खाएको बेला कफी, चियाहरु सकभर नखाँदा राम्रो हुन्छ।
६. यदि कुनै गर्भवती वा सुत्केरी महिलाले अघिल्लो दिन आइरन चक्की खान बिर्सीएको खण्डमा अर्को दिन आइरन चक्की खाँदा अघिल्लो दिनको मात्रा पनि थपेर खाने कि के गर्ने ? अर्थात आईरन चक्की खान बिर्सियो भने के गर्ने?
सकभर आईरन चक्की एकदिन पनि नछुटाई खाएको राम्रो हो। कारणबस एकदिन छुट्यो भने अर्को दिन २ वटा एकैचोटि खान मिल्दैन। त्यस्को मात्रा बढि भएर समस्याहरु देखा पर्न सक्छ।
छुटेकोलाई नखाने अर्को दिनबाट नियमित खान सुरु गर्नु पर्छ। आईरन चक्की भनेको नेपाल सरकारबाट निशुल्क वितरण भईरहेको छ । यदि कहीँ टाढा जाँदा छुट्यो भने जहाँ जानुभएको छ त्यो ठाउँको स्वास्थ्य संस्थाबाट लिएर खान सक्नुहुन्छ।
७.आईरनजन्य खानेकुराहरु खाए आईरन चक्की खाइरहन पर्दैन भन्नेगरेको पनि सुनिन्छ। आइरन चक्कीको नियमित र पूरा मात्रा सेवनले थप के परिपूर्ति गर्छ आमाको शरिरमा ?
आईरनजन्य खानेकुराहरु पनि खान पाइन्छ । त्यो मात्र खाँदा गर्भअवस्थामा आईरनको मात्रा परिपुर्ति हुदैन । सामान्य मानिसहरुको लागि दिनमा ८ एमजी आईरन चक्कीले शरीरमा पुग्छ भने गर्भवती अवस्थामा २७ एमजी चाहिन्छ।
शरीरमा चारगुना बढि आईरनको मात्रा चाहिने भएको कारणले जति नै पौष्टिक आहार खाएतापनि शरीरमा आईरनको मात्रा परिपुर्ति नहुने भएको कारणले थप आईरन चक्की खान एकदम जरुरत हुन्छ। आईरन चक्की पुरा मात्रामा खायौँ भने गर्भवती महिलालाई रक्तअल्पता हुनबाट बच्न सक्छ । आईरनको कमीले ९ महिना भन्दा अगाडि नै बच्चा जन्मिन सक्छ । यस्ता विभिन्न समस्याहरुबाट बच्न सकिन्छ।
८. धेरैजसो गर्भवती महिलाले आईरन चक्की खाँदा कालो दिसा आउने, आइरन गन्हाउँने, वान्ता आउँने जस्ता सामान्य साइड इफेक्ट वा सामान्य असरहरु देखिन्छन्। जुन सामान्य हो तर यो देखिनाका कारणले पनि आईरन चक्की नियमित नखाईरहेको वा खाँदाखाँदै छाडेको पनि पाइएको छ, उहाँहरुलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ?
आईरन चक्की खाँदा सामान्य साइड इफेक्टहरु देखिन्छ। कालो दिसा आउने, आइरन गन्हाउँने, वान्ता आउँने जस्ता समस्या हुन सक्छ। तर यस्तो समस्या हुँदा गर्भवती महिलाको दैनिक जिवनमा कुनै बाधा पुगेको छैन भने आईरन चक्की नछुटाई खानुपर्छ। शरीरले खाएको आईरन चक्की ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र शरीरले लिने गर्छ बाँकी दिसाबाट जान्छ त्यसकारणले कालो दिसा आउने समस्या हुन्छ।
आईरन चक्की खान छोड्नु भएपछि आफै समाधान हुन्छ। आईरन चक्कीमा अलिकता गन्ध आउने हुन्छ। वाकवाकी लागे पनि नियमित रुपमा आईरन चक्की खानुपर्छ।आईरन चक्कीले गर्दा एकदम धेरै साइड इफेक्ट भयो भने अर्को कम्पनीको आईरन चक्की लिन सक्नुहुन्छ।
९. आईरन चक्की सेवन सम्बन्धमा कतिपय भ्रमहरु वा लापरवाही गर्ने कारणले धेरै गर्भवती तथा सुत्केरीहरुले आईरन चक्की पूरा मात्रामा नखाने, नियमित रुपमा नखाने गरेको पनि पाइन्छ। जस्तो, आईरन चक्की खाँदा बच्चा ठूलो हुन्छ, कब्जीयत हुन्छ, अनुहारमा चायाँपोतो आउँछ, भन्ने जस्ता भ्रमपनि छन् नि ? यसलाई कसरी चिर्ने?
आईरन चक्की खाँदा कसै कसैलाई कब्जियत हुनसक्छ । त्यसको लागि पानी एकदम खानुप¥यो, रसायनयुक्त खानेकुराहरु खानुप¥यो। ठुलो समस्या छ भने स्वास्थ्य संस्थामा गएर आईरन चक्कीको कारणले मात्र होइन अरु कारणले पनि समस्या हुन सक्छ जँचाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।
१०.आईरन चक्की बिचैमा खान छोड्यो वा पूरा मात्रामा खाएनभनेँ के बेफाइदा हुन्छ?
आईरन चक्की बिचैमा खान छोड्यौँ भने शरीरमा रगतको मात्रा कम हुन्छ। शरीरको हरेक अङगहरुलाई तत्वहरुलाइ काम गर्नको लागि अक्सिजनको मद्धत चाहिन्छ जुन अक्सिजन शरीरको विभिन्न अङग र तत्वहरुमा पु¥याउनेकाम आईरनले गर्छ। आईरनको कमी भयो भने शरीरको विभिन्न अङगहरुमा अक्सिजन पुग्दैन । आल्स्य हुने, कमजोरी हुने, आईरन चक्कीको कमीले धेरै कुरामा बेफाइदा हुने गर्छ।
११. नियमित आईरन चक्की खानाले चाहि गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला र जन्मिने वा जन्मिएको बच्चालाई के फाईदा पुग्छ?
नियमित आईरन चक्की खानाले चाहि गर्भवती महिलाको शरीरमा रगतको मात्रा बढछ्। सुत्केरी अवस्थामा रगत धेरै बगीरहेको हुन्छ त्यो अवस्थामा रगतको परिपुर्ति गर्ने र भर्खर जन्मेको बच्चाको दिमागमा वृद्धि विकास हुने, बच्चा टाठो,बाठो हुने कुराहरु हुन्छ।
१२. आईरन चक्कीसँग आइरन प्राप्त गर्ने अन्य खानेकुराहरु केके हुनसक्छन्? जुन गर्भवती तथा सुत्केरीको निम्ति फाइदाजनक हुन्छ?
आईरनजन्य खानेकुराहरु लौकाको जुस, हरियो तरकारी, मटर, दाल, राजमा, गहुँको पिठो, सुजिको पिठो, आलु, स्याउ, अनार, किसमिस, आखर, कुखुराको अण्डा, रातो मासु, खसीको मासु आदिमा पाइन्छ।
१३.अहिलेको कोरोना महामारीको समयमा पनि गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले आईरन चक्की खान नछुटोस भन्नका लागि धेरै दिन सम्मलाइ पुग्ने गरी एकैपटक लिन सकिन्छ ? सकिन्छ भनेँ कति समयसम्मको लागी कहाँबाट कसरी लिन सकिन्छ?
अहिलेको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दा स्वास्थ्य संस्थाबाट दुई महिनासम्मको लागि आईरन चक्की प्राप्त गर्न सकिन्छ।अन्य कुनै समस्या छैन भने २/२ महिनाको अन्तरमा स्वास्थय संस्था गएर जचाँउनै पर्ने भएको कारण २ महिनाको लागि आईरन चक्की लेराएर घरमै खान सक्नुहुन्छ।
१४.छलफलको अन्त्यमा, यो बेला आईरन चक्की लिन स्वास्थ्यसंस्था वा स्वास्थकर्मीकहाँ वा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकोमा जाँदा के कस्ता सावधानीहरु अपनाउनुपर्छ ?
गर्भवती अवस्थाको लागि कोरोना खतरनाक अवस्था हो। स्वास्थ्यसंस्था, स्वास्थकर्मीकहाँ वा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकोमा जाँदा मास्क अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाईजर प्रयोग गर्ने।स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सम्पर्कमा रहेर भिडभाड नभएको बेला जानुहोला।कम्तिमा २ मिटरको दुरी कायम गरेर सेवा लिनुहोला भन्न चाहन्छु,धन्यबाद !